UPDATE: Askar ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu dilay Ceelasha Biyaha, qoryihiina laga qaatay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Askar ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu dilay Ceelasha Biyaha, qoryihiina...
UPDATE: Askar ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu dilay Ceelasha Biyaha, qoryihiina laga qaatay
Muqdisho (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya Deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Koonfureed Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya kooxo hubaysan ay halkaasi ku toogteen Askar ka tirsan Ciidamada dowladda.
Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka Isbitaalka Zamzam ee Ceelasha biyaha, kadib markii laba nin oo bistooladley ah ay toogteen laba Askari oo qoryo watay.
Markii ay dileen labada Askari kadib waxa ay ka qaateen labadii qori oo ay wateen, kadibna waxa ay ka baxsadeen goobtii dilka uu ka dhacay.
Ciidan kale oo ka tirsan kuwa dowladda ayaa gaaray goobta ay wax ka dhaceen, waxaana halkaasi ay ka soo qaadeen maydka labadii Askari ee toogashada lagu dilay.
Si kastaba, ciidamada dowladda ayaa deegaanka Ceelasha biyaha ka bilaabay hawlgal baaritaan ah oo lagu raadinaayo Kooxdii sida gaadmada ah u dishay labada Askari, kadibna goobta ka baxsday.
Askar ka tirsan dowladda oo lagu toogtay Ceelasha Biyaha